Umbiko wesikhashana wezethulo kwelomhlaba - Bayede News
Umbiko wesikhashana wezethulo kwelomhlaba
Abezindaba abekho msulwa kwelokugwamandwa kombuso
IKOMIDI elihlanganyele lasePhalamende Elicubungula ukuChitshiyelwa koMthethosisekelo seliwutholile umbiko wesikhashana wezethulo ezenziwa emphakathini kuzona zonke izifundazwe eziyisishiyagalombili. Ngeledlule leli komidi linqume ukuba liphinde licele ukuba kuqhutshekwe nokulalelwa kwezethulo mayelana nokuchitshiyelwa kweSigaba 25 soMthethosisekelo esizogunyaza ukuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo.
Ukufinyelela kwekomidi kulesi sinqumo kulandela ukuvela kwamagama ali- 120 ezethulweni ezazibhalwe phansi. Leli komidi libuye lanxusa uSomlomo noSihlalo woMkhandlu Wezifundazwe ukuba bayibhekisise eyokwelulwa kwesikhathi sokuvalwa kokubuyisa umbiko wasePhalamende. Omunye woZihlalo beKomidi uMnu uLewis Nkosi uthe izethulo ezenziwe ngomlomo zifinyelele kuma-42.
Uthe babone ukuthi selulwe isikhathi sokwenza izethulo. Ikomidi libuye lathola umbiko wesikhashana wezethulo ezenziwa ezifundazweni eziyisishiyagalombili mayelana nokuchitshiyelwa kweSigaba 25 soMthethosisekelo.
Ukulalelwa kwezethulo ezenziwa ngomlomo kuzoqala ngesonto elizayo. Ngesikhathi kuqhubeka izigcawu zokuzwa uvo lomphakathi ngokuchitshiyelwa koMthethosisekelo okwagqama ukuthi imimoya yayiphezulu kubantu ngodaba lomhlaba. Ngesikhathi kuhleli izithangami KwaZulu-Natal izethulo ezenziwa ngabesizwe samaKhoisan zaqubula imvunge bethi empeleni yibo abokuqala abafika e-Afrika yingakho ingxenye enkulu yomhlaba kungeyabo.
Ngakolunye uhlangothi abalimi abaMhlophe ababenza izethulo bathi awukho umhlaba abaqwahe nawo kodwa kuningi abakwenzayo ukuqeqesha abaMnyama kwezolimo ukuze bakwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ukudla uma umhlaba ususezandleni zabo.
Abanye abaMnyama bathi akuwona wonke umhlaba ozophendulwa amasimu, ngakho ukulima akumele kubonakale njengehawu lamaBhunu nokusabisa abaMnyama ukuthi angeke bakwazi ukuqhubeka nokukhiqiza ukudla uma bengaqeqeshekile ngendlela kwezolimo.
Kuqiniswa izinhlelo zokulwa nobugebengu ezweni
Kukhona abathi abalimi abaMhlophe sebejika ukukhuluma manje ngezinhlelo abanazo zokuqeqesha abaMnyama kwezolimo ekubeni yonke le minyaka bekade beqwahe nomhlaba.
Ngesikhathi iKomidi linxusa ukuthi kwengezwe isikhathi sokwenza izethulo iDemocratic Alliance yabhalele iSouth African Human Rights Commission (SAHRC), ifuna ukuba uNgqongqoshe Wezokuthuthukiswa Kwezindaba Zasemakhaya angenelele icela nokuba kube nophenyo ngokungavikelwa kwabantu baseNingizimu Afrika abahlala ezindaweni abangenawo amalungelo azo.
IDA ithi yakwenza lokhu ngoba sekuphele iminyaka engaphezulu kwama-20 uHulumeni oholwa i-ANC wehluleka ukusebenzisa Isigaba 25 nesigatshana-6 soMthethosisekelo, okushiya abantu abalinganiselwa ezigidini ezili-18 abahlala ezindaweni ezisemakhaya isikhathi esiningi eziphethwe ngaMakhosi bengenazo izimvume ezisemthethweni zomhlaba abahlala kuwo. Esitatimendeni iDA yathi noma ngabe uguquko luyenzeka okanye alwenzeki kuMthethosisekelo kodwa kuyadingeka ukuba isukunyelwe ngokushesha eyomhlaba.
nguNgqeshe Buthelezi Oct 4, 2018